Rafi-pitsarana ao Malezia - Mpisolovava avy amin'ny firenena Arabo. Arabo mpisolovava an-tserasera.
Rafi-pitsarana ao Malezia
Rafi-pitsarana ao Malezia betsaka foibe na dia eo aza i Malezia ny lalàmpanorenana federaly, be voatariky ny malagasy mahazatra ny lalàna sy ny ambany hatraiza ny lalàna IslamikaMisy amin'ny ankapobeny dia roa karazana fitsapana, heloka bevava sy sivily. Ny ambaratongam-pitantanana ny fitsaràna dia manomboka avy amin'ny Mpitsara' ny Fitsarana, eo amin'ny Fotoam-Pitsarana, ny Fitsarana Ambony, ireo Fitsarana Ambony, ary farany, ny Fitsarana Federaly. Ny fahefana ny fitsarana ao an-trano na mpanao heloka bevava ny raharaha dia hita ao amin'ny Endriky ny Fitsarana Hanao sy ny Fitsarana ny Judicature Asa. Andininy faha- ao amin'ny Lalàmpanorenana dia manome nandritra ny roa Avo ny Fitsarana ny mpiara-marika fahefana, ny Fitsarana Ambony ao Malaya, ary ny Fitsarana Avo ao Sabah sy ny Sarawak. Dia toy izany no, izany dia miteraka roa samy hafa ao an-toerana ny fahefana ny fitsarana ho Saikinosy Malezia ary ho Atsinanan'i Malezia. Ny toerana avo indrindra ao amin'ny rafi-pitsarana ao Malezia dia ny Lehiben'ny Fitsarana momba ny Fitsarana Federaly any Malezia (fantatra ihany koa ho toy ny Lehiben'ny Fitsaràna ao Malayzia), nanaraka ny Filohan 'ny Fitsarana Ambony, ny Lohan' ny Mpitsara ny Malaya sy ny Lohan ny Mpitsara Sabah sy Sarawak. Ny fitsarana ambony dia ny Fitsarana Avo, ny Fitsarana Ambony sy ny Fitsarana Federaly, raha ny Mpitsara' ny Fitsarana sy ny Fivoriana ny Fitsarana dia sokajiana ho ambany ny fitsarana. Ny Filoha ankehitriny ny Fitsarana Federaly mahomby iraika ambin'ny folo amin'ny volana jolay amin'ny taona dia Tan Sri Richard Mulanje, ny Filohan 'ny Fitsarana Ambony dia Tan Sri Dato' Sri Ahmad Bin Haji Marol, sy ny Lohan ny Mpitsara ny Malaya dia Tan Sri Zahra Ibrahim. Ny amin'izao fotoana izao ny Lohan ny Mpitsara ny Sabah sy ny Sarawak dia Rariny Datuk David Wong Maizina Wah. Misy telo ny fitsarana amin'ny hafa ny fahefana ao anatin'ny izay fantatra amin'ny anarana hoe ny Fitsarana Ambony. Izy ireo dia ny Fitsarana Federaly: ny fitsarana faratampony teo amin ny tany, ny Fitsarana Ambony, ny Fitsarana Avo Malaya sy ny Fitsarana Ambony ao Sabah sy ny Sarawak. Ny tsirairay dia tarihan'ny federaly mpitsara antsoina hoe ny Lehiben'ny Fitsarana momba ny Fitsarana Federaly, ny Filohan 'ny Fitsarana Ambony ary Lohan' ny Mpitsara ny Fitsarana Avo Malaya sy Sabah sy ny Sarawak tsirairay avy. Ny Fitsarana Federaly dia ny fitsarana faratampony ao Malezia. Ny Fitsarana Federaly mety mandre ny antso an-trano ny fanapahan-kevitra ny Fitsarana Ambony izay misy ny Fitsarana Federaly atolotry avelao hanao izany. Ny Fitsarana Federaly ihany koa ny mihaino ny heloka bevava antso avy amin'ny Fitsarana Ambony, afa-tsy ny fanajana ny raharaha ren ny Fitsarana Avo ao am-boalohany ny fahefana (aho. aiza ilay raharaha dia tsy nisy niantso avy amin'ny Ambany ny Fitsarana). Ny Fitsarana Ambony amin'ny ankapobeny mihaino rehetra sivily miantso fanoherana ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Avo afa-tsy izay manohitra ny fitsarana na baiko atao amin'ny fanekena. Amin'ny toe-javatra izay milaza fa tsy noho ny RM, ny fitsarana na ny filaminana mikasika ny vidiny ihany, sy ny antso dia ho fanoherana ny fanapahan-kevitry ny mpitsara amin'ny efi-trano momba ny interpleader azy amin'ny azo iadian-kevitra aloha ny zava-misy, ny hamela ny Fitsarana Ambony dia tsy maintsy aloha ho azo. Ny Fitsarana Ambony koa ny reny ny miantso ny heloka bevava, ny fanapahan-kevitra ny Fitsarana Avo. Izany dia ny fitsarana farany fahefana ho an'ny toe-javatra izay nanomboka tao misy ambany ny fitsarana. Ny roa Fitsarana Avo ao Malezia no maneran-tany sy ny fanaraha-maso ny revisionary fahefana manerana ny Ambany ny Fitsarana, ary ny fahefana mba mihaino ny antso avy any Ambany Fitsarana ao an-trano sy ny ady heloka ny raharaha. Ny Fitsarana Avo no tsy manam-petra ny sivily izany fahefana izany, ary amin'ny ankapobeny dia mandre ny fihetsiny izay milaza mihoatra ny RM, hafa noho ny asa mahakasika ny maotera fiara loza, tompony sy ny mpanofa ny fifandirana sy ny fahoriana. Ny Fitsarana Avo ny mandre ny zava-drehetra mikasika: Ny Fitsarana Avo manana fahefana tsy manam-petra rehetra mpanao heloka bevava ny raharaha hafa noho ireo olana mahakasika ny lalàna Islamika. Ny Fitsarana Avo no tany am-boalohany fahefana amin'ny heloka bevava azo amin'ny alalan'ny fahafatesana. Toe-javatra ireo reny iray tokan-tena, ny mpitsara ao amin'ny Fitsarana Ambony, na amin'ny mpiandraiki-draharaha ara-pitsarana. Raha toa ny Fitsarana Avo mpitsara hankafy ny fiarovana ny fananan, ara-pitsarana ny kaomisera voatendry ho teny ny roa taona, ary tsy hankafy mitovy eo ambany fiarovana ny lalàm-Panorenana. Ny Mpitsara' ny Fitsarana sy ny Fivoriana ny Fitsarana ao Malezia dia manana ny fahefana eo amin'ny fanaraha-maso ny samy mpanao heloka bevava sy sivily ny raharaha. Toa tahaka ny teo aloha Ampahefatry ny Fivoriana tany Angletera, fa tsy mihoatra ny RM, toy ny isan-ss (b) (b), ny Ambany ny Fitsarana Hanao (SAC). Ny an-kanavaka na izany aza dia zava-dehibe mikasika ny maotera fiara loza, tompony sy ny mpanofa sy ny fahoriana, izay ny Fivoriana Fitsarana manana fahefana tsy manam-petra nanaraka s (a)SAC. Koa, noho ny hatsaran-toetra s SAC, ny antoko ara-dalàna, asa mety miditra ao amin'ny fifanarahana an-tsoratra ny hanome fahefana ny Fivoriana Fitsarana mba miezaka ny hetsika mihoatra noho ny voalaza vola fahefana aforesaid. Ny mpitsara dia zaraina ho Kilasy Voalohany sy Faharoa-Kilasy ny Mpitsara, ny teo aloha ny maha ara-dalàna mahay sy manana hery lehibe kokoa. Kilasy faharoa ny Mpitsara dia izao tsy voatendry ara-dalàna. Amin'ny resaka heloka bevava, Kilasy Voalohany ny Mpitsara' ny Fitsarana amin'ny ankapobeny dia manana fahefana miezaka ny fandikan-dalàna rehetra izay mitrandraka ny teny fampidirana am-ponja tsy mihoatra ny folo taona, na izay mety tsara ihany, nefa mety nitranga sazy izay tsy mihoatra ny dimy taona ny fanagadrana, ny tsara hatramin'ny RM, ary na hatramin'ny roa ambin ny folo ny kapoka ny tehina araka ny andininy faha- Ambany lalànan'ny Fitsarana. Ny Mpitsara ny Fitsarana hihaino izay rehetra an-trano manan-danja amin'ny latsaky ny RM, ao amin'ny fifandirana. Ny Mpitsara' ny Fitsarana ihany koa ny mihaino ny antso avy amin'ny Penghulu ny Fitsarana. tapitra ny fitsarana ny penghulu, na Zavatra tanàna lohany, dia manana ny fahefana mba hihaino an-trano manan-danja izay milaza ny tsy hihoatra RM, izay ny antoko iray any Azia foko ary hiteny sy hahafantatra ny fiteny Malay. Ny Penghulu Fitsarana heloka bevava ao fahefana voafetra ho fandikan-dalàna ny tsy ampy taona maha-tsaraina araka ny olona ao Azia hazakazaka izay nanonona manokana ny didy fampisamborana, izay afaka ny ho saziana lamandy tsy mihoatra RM. Ao Sabah sy ny Sarawak, tsy misy Penghulus' ny Fitsarana, fa misy fa tsy Tompon-tany Fitsarana manana fahefana amin'ny zavatra izay mahakasika ny tompon-tany lalàna sy fomba amam-panao. Ny Fitsarana ho an'ny Ankizy, teo aloha fantatra amin'ny anarana hoe ny Tanora amin'ny Fitsarana, ny mihaino ny toe-javatra mahakasika ny zaza tsy ampy taona afa-tsy ny toe-javatra mitondra amin'ny fahafatesana sazy, izay dia nandre ny amin'ny Fitsarana Avo fa tsy. Toe-javatra ho an'ny ankizy no fehezin'ny ny Ankizy Hanao ny taona. Ny Fitsarana Manokana niorina tamin'ny taona mba hihaino ny toe-javatra ny fandikan-dalàna na ireo fahadisoana atao amin'ny Mpanapaka. Ny Mpitondra dia ahitana ny Yang di-Mikasika ny Fahanterana (Mpanjaka), ny sultans ny monarchical firenena ao Malezia, ny Yang di-Petrus Negeri, ary ny Yang di-ny Momba ny Vavolombelona aho.
e. ny lohan'ny firenena Malaysia sy ny singa states Mialoha izany, ny Mpanapaka dia afa-miala avy amin'ny fitsarana izay nitondra azy ireo manokana ankehitriny.
Farida Begum bet Abdullah v Ahmad Shah no tranga voalohany ny ho re eo amin'ny fitsarana ity. Misy mitovy ny rafi-panjakana, ny Fitsarana Syariah izay efa voafetra ihany ny fahefana hitsara ny raharaha ny fanjakana Islamika (sharia) ny lalàna. Ny Fitsarana Syariah manana fahefana afa-tsy ny raharaha mahakasika ny Silamo sy ny afaka amin'ny ankapobeny ihany no nitranga ny sazy izay tsy mihoatra ny telo taona an-tranomaizina, ny tsara hatramin'ny RM, ary na hatramin'ny enim-kapoka ny ny fary. Ny fanendrena ny Lehiben'ny Fitsarana-dia fehezin'ny Andininy faha-B ny lalàm-Panorenana ao Malezia izay ny Yang di-Mikasika ny Fahanterana (Mpanjaka) manendry ny Lehiben'ny Fitsarana momba ny toro-hevitra ny Praiminisitra any Malezia rehefa avy nakàna ny hevitry ny Fihaonambe ny Mpanapaka. Toy ny amin'ny fanendrena ny Filohan 'ny Fitsarana Ambony, ny Lohan' ny Mpitsara ny Malaya, ny Lohan ny Mpitsara ny Sabah sy ny Sarawak, sy ny Fitsarana Federaly mpitsara, dia mitovy fomba nalaina miaraka amin'ny fanampiny fepetra ny fakan-kevitra amin'ny Lehiben'ny Fitsarana. Ny fanendrena ny Fitsarana Ambony mpitsara koa fehezin'ny mitovy ny fomba fiasa miaraka amin'ny fanampiny fepetra takiana ho an'ny fakan-kevitra ny Filohan ny Fitsarana Ambony. Araka ny fanendrena ny Fitsarana Avo mpitsara, dia mitovy ny fomba fiasa dia voalaza miaraka ny fepetra fanampiny ny fakan-kevitra amin'ny tsirairay Lohan ny Mpitsara.
Ny fanendrena ny fotoam-Pivoriana Fitsarana ny mpitsara dia tantanana amin'ny alalan'ny Fizarana faha- ny Ambany lalànan'ny Fitsarana.
Izy ireo dia tendren'ny Yang di-Mikasika ny Fahanterana eo amin 'ny toro-hevitra ny tsirairay Lohan' ny Mpitsara. Fizarana faha- ny Ambany ny Fitsarana Hanao manome fa ny fanendrena ny mpitsara atao avy ny tsirairay-panjakana eo amin 'ny toro-hevitra ny tsirairay Lohan' ny Mpitsara, afa-tsy ho an'ny mpitsara ao amin'ny Federaly Faritra, izay notendren'ny Yang di-Mikasika ny Fahanterana eo amin 'ny toro-hevitra ny Lohan' ny Mpitsara.
Asa ny mpahay lalàna, Lalàna Orinasa ao Emirà Arabo Mitambatra ho Isan-Tanàna
Daftar negara-Negara yang Berbicara bahasa arab - bahasa arab negara-Negara Berbahasa